Motor andriamby Fivoriambe - China Ningbo Sine
Motor lasibatry & Fivoriambe Linear Motor lasibatry - Neodymium Magnet Manufacturer Ningbo Sine andriamby Company. Linear maharitra maotera andriamby dia karazana fifindran'ny izay afaka manova ny mihidy sahan'andriamby amin'ny misokatra iray manova herinaratra sy angovo ny milina angovo mihetsika ao amin 'ny tsipika mahitsy tsy misy fiovam-po kafa rafitra. Main endri-javatra: 1. Tena manaiky sy mahomby, afaka lava ny lalana, ary tsy mila fikojakojana, miaraka amin'ny feo iva sady mandimandina hery nanosika. 2 ...
Motor lasibatry & Assembly
Linear Motor lasibatry - Neodymium Magnet Manufacturer Ningbo Sine andriamby Company.
Linear maharitra maotera andriamby dia karazana fifindran'ny izay afaka manova ny mihidy sahan'andriamby amin'ny misokatra iray manova herinaratra sy angovo ny milina angovo mihetsika ao amin 'ny tsipika mahitsy tsy misy fiovam-po kafa rafitra.
1. Tena manaiky sy mahomby, afaka lava ny lalana, ary tsy mila fikojakojana, miaraka amin'ny feo iva sady mandimandina hery nanosika.
2. Afaka tonga avo araka ny marina ny fampiharana ny makarakara mpitondra. Manana hafainganam-pandeha mafy amin'ny hafainganam-pandeha avo haingana sy fohy dingana haingana.
3. Moa be ampiharina amin'ny fampiasana sivily, ny indostria sy ny miaramila.
Haingam-pandeha Rotors - Magnet Manufacturer Ningbo Sine andriamby Company
Ankoatra maharitra Andriamby, araka ny mpanjifa fepetra manokana, dia afaka mamokatra samy hafa ny fiangonana, toy ny maotera akorany fiangonana, haingam-pandeha sy ny marina rotors stepper rotors maotera. Afaka manome anao isan-karazany haingam-pandeha avo maotera Fanodina fampisehoana, miodina hafainganam-pandeha, marina tsara sy ny harafesiny fanoherana. Koa, dia azo amidy amin'ny maotera miara-lavaka. Amin'ny ela niainana ny andriamby fampiharana, dia afaka manome optimisé fampiharana drafitry ny andriamby fitaovana .
1. fameram-pitenenana hafainganam-pandeha dia afaka hahatratra 60000-120000rpm
2. araka ny marina lafiny
haingam-pandeha foana rotors dia ampiharina amin'ny maotera sy ny orinasa modely brushless Motors, izay ahitana maharitra lasibatry (sintered néodyme avoakan'ireo andriamby, tsindrona ferrite avoakan'ireo andriamby, , nampikambana néodyme avoakan'ireo andriamby, na samarium kobalta lasibatry) sy vy bearings.
Energy-famonjena, hanatsorana famolavolana sy ny miniaturization no tombony ny PM maotera, raha oharina amin'ny nentim-paharazana maotera. Ireo fiangonana dia manana torques lehibe sy ny feo ambany. Afaka nivory axles, Gears sy ny andriamby rotors miaraka mba hanaovana fivoriambe.
Neodymium andriamby efa voavitrana Manufacturer -Ningbo Sine andriamby Company
Traditional sakamandimby fifandraisana rehetra. Service fiainan'ny couplers dia voafetra ihany ny abrasion, ary tsy maintsy miasa amin'ny toe-javatra voaisy tombo-kase, fa leakage foana ny vokatry ny kilema mavitrika famehezana. Andriamby sakamandimby mandany tsy miasa fomba fifandraisana miorina amin'ny efa voavitrana andriamby fitsipika, izay fomba fanompoana ny fiainana dia nohalavaina indrindra. Ary koa, ireo mampiasa voasakantsakan'ny sakamandimby famehezana fa tsy mavitrika famehezana, izay mamaha ny olana ny leakage.
Amin'ny taona ny traikefa amin'ny andriamby teknolojia, andriamby maharitra mpanamboatra Sine Magnetics Company Limited dia afaka manome anao amin'ny asa fanompoana ny andriamby vokatra. Mandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny fahaizana ny tsy miankina mivoatra sy fikarohana sy ny planina, dia afaka hanatitra anao optimisé vokatra teti-dratsy sy ny fampiharana drafitra.
1. Non-andriamby fifandraisana sakamandimby mampiasa andriamby efa voavitrana teorian'ny
2. voasakantsakan'ny voaisy tombo-kase, avo sy ny fahombiazan'ny fametrahana mazava tsara, tsy misy leakage
Ireo sakamandimby andriamby dia azo ampiasaina amin'ny simika sy ny taratasy fanaovana indostria, sns
Automobile dia tena manan-danja fampiharana faritra NdFeB andriamby, dia mitendry anjara manan-danja ao aminy, be dia be ny Motors sy ny singa avoakan'ireo andriamby, mba mila fiara maivana, mahay, mainka mampahazo aina, ary tsara kokoa sy tsara kokoa traikefa mitondra fiara.
Previous: Tantera-drano andriamby Button
Manaraka: AlNiCo avoakan'ireo andriamby,